Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : sao ianao mihevitra ho lahiny | NewsMada
Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : sao ianao mihevitra ho lahiny
Maro ireo mpanao pôlitika mikasa na efa nanambara mihitsy ny fahavononany hilatsaka amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny Repoblika. Samy manamboamboatra ny tenany avokoa izy ireo mba isarihana ny mpifidy handatsa-bato ho azy. Aty amin’ny fiaraha-monina, ny olona koa mba samy mamisavisa ny karazandrazan’olona izay iriny ho tafita amin’izany fifaninanana izany. Maro ihany ny olona tonga dia manilika an’itsy na an’iry, sady halany toetra no tsy tiany hojerena. Vitsy ireo tena hoe mamy hoditra amin’ny vahoaka. Izay mipoitra toa ahitana kilema avokoa. Na izany aza efa misy ireo misongadina izay heverina fa ny roa amin’izy ireo no mety ho tafita amin’ ny sivana voalohany ka afaka hikatroka amin’ny fihodinana faharoa.
Tsy mbola any moa ny tena resaka izao fa vinavina fotsiny ny momba izany, betsaka ny zavatra mbola mety hiseho ary maro ny dingana tsy maintsy diavina ka malalaka ny sehatra amisavisana an’ilay filoha izay alain’ny tsirairay sary ao an-tsainy. Ao ireo maniry filoha teknisiana, ady hevitra ny momba izay. Marina fa sarotra ny fifehezana ny raharaham-pirenena ka mila olona tena matsilo hitantana. Tsy ny manam-pahaizana no tsy misy fa ny tena tsapa fa manam-panahy no tsy tazana firy.
Izay eo amin’io toerana tampony io dia tandindonin’ ny fivontosan’ny loha, tototry ny voninahitra sy fandokafana izay mahajambena raha toa marivo saina. Sangisangy ihany angamba nefa mendrika ho dinihin’ireo mpilatsaka ny filàna fiofanana ho fanomanana azy rehetra amin’ny fiantsorohana an’izany andraikitra tampony antoky ny fiainan’ny vahoaka sy ny ho avin’ny firenena. Izy ireo samy nanana ny fiomanany fa samy nandingana ny fampianarana any amin’ny Sekolin’ny Fanetren-tena. Noho ny adidy lehibe ahankina aminy dia na zoky izy na zandry dia rariny amin’ny maha Malagasy raha tsofin-drano ho Raiamandrenin’ny rehetra. Izany anefa tsy ampy ho hieverany ny tenany ho izy no tena dadany amin’ny zava-drehetra. Sarotra anefa izany hoe tompon’ny fanapahana farany sady vonton’ny fahafantarana fa tsy tompon’ny fahaizana tampony, sady mitaky fahaizana mametraka didy entitra sy fampisehoana fanetren-tena.
Iza moa no afaka ho lazaina tsy mahay n’inona n’inona afa-tsy izay mieboebo miseho mahay n’inona n’inona. Tandremo kely lahy sao mihevitra ny tena ho lahiny nefa rehefa mirehitra mitsonika toy ny jabora.